မိုးရေထဲက ကျိုက်ထီးရိုးခရီး-၁ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » မိုးရေထဲက ကျိုက်ထီးရိုးခရီး-၁
Posted by ရွှေတိုက်စိုး on Oct 22, 2011 in Copy/Paste | 15 comments
တောင်တက်လမ်းက စိမ်းစိုးနေတဲ့ မြင်ကွင်းလေးပါ.. စိတ်ကို လန်းဆန်း သွားတာပဲဗျ…
တောင်တက်လမ်းပါ.. ကားသွားနေတုန်း သက်စွန်.ဆံဖျားရိုက်ထားတာနော်.. လက်ကလဲ မြဲအောင်ကိုင်ထားရသေးတယ်… ဒါနဲ. လမ်းတွေကတော့ ရှယ်ပဲဗျာ.. အန္တရာယ်ကင်းအောင်တော်တော်လုပ်ထားတယ်…
ရောက်ပါပြီဗျာ.. အဲဒီကို ရောက်ဖို. တိမ်တွေထဲမှာ ကားစီးလာရတာ မိုက်တယ်ဗျ.
စစတက်ချင်း ဘုရားကိုတောင်မမြင်ရဘူးဗျ.. ပိတ်နေတာပဲ မြူတွေဆိုင်းနေတာ
ဒီပုံကိုတော့ တည်းခိုခန်း ကိစ္စတွေပြီးမှ သွားရိုက်ထားရတာပါ.. တည်းခိုခန်းကတော့ ၅ ယောက်ခန်းကို တစ်ရက် ၃၀၀၀၀ ကျပ် ပေးရပါတယ် ဗျာ
ကျိုက်ထီးရိုးဘုရား ကို ဆိုင်မှာထိုင်နေရင်း ဖူးခွင့်ရလိုက်ပြန်ပါပြီ ၊
ကားတက်လမ်း ရိုက်ထားတဲ့ ဓါတ်ပုံ နဲနေသလားလို့..
အကွေ့အကောက် အန္တရာယ်ကွေ့ လမ်းရှုခင်း ပါရင် ပိုကောင်းမယ်ထင်ပါတယ်..။
ရိုက်လာပါတယ်ဗျာ.. ဒါပေမယ့် video file တွေဖြစ်နေတော့ တင်ရခက်တာပါ…
ကိုင်ထား ကိုင်ထား.. ပေါက်ဖော် လို ကိုင်ထား ပေါက်ဖော် ဆို ဘယ်လောက် ခါရမ်းရမ်း လုံးဝ မကျဘူး (ပုလင်း) လက်ညိုးတောင် ထောင်နိုင်သေးတယ်။
နိုဝင်ဘာ လဆန်းပိုင်းမှာ သွားဖို့ ရှိတယ်။
တည်းခိုခန်းက ဘယ်မှာလဲ ဟိုတယ် က ကော ဘယ်ဈေးပေါက်လဲ..
ရောက်တာနဲ့ အခန်း ကိစ္စ တော်တော် ရှာရလား ခက်လား နည်းနည်း လမ်းညွန်ပါအုန်း။
်ဟုတ်ကဲ့ အေးပါတယ် .. မနက် ၁၁နာရီလောက်မှ နေထွက်တာပါ ညဆို မိုးနဲနဲရွာပါတယ်.. နိုဝင်ဘာလလောက်ဆိုရင်တော့ အေးမှာသေချာတယ်… တည်းခိုခန်းကတော့ ရင်ပြင်တော်ပေါ်က သုံးထပ်ဆောင်မှာ တော်တော်လေးသန်.ပါတယ်… အပေါ်ဆုံးထပ်မှာ ဆရာတော် ဘုန်းကြီးတွေ အတွက်နဲ. ကျန်အထပ်တွေမှာ လူတွေအတွက်ပါ.. အလယ်ထပ်မှာတော့ တီဗွီ ရှိပါတယ်.. ထမင်းနဲ.ရေနွေးကြမ်းတွေ ၊ခေါက်ဆွဲပြုတ်တွေဝယ်စားမယ်ဆို၇င်တော့ အောက်ဆုံးထပ်မှာ ဈေးဆိုင်၇ှိပါတယ်… ရေချိုးခန်းနဲ. အိမ်သာကတော့ public ပါ ဒါပေမယ့် သန်.ပါတယ်.. အထပ်တိုင်းမှာ အမြဲသန်.ရှင်းရေးလုပ်နေတဲ့ ၀န်းထမ်း ကောင်းလေးတွေ ၂ယောက်ရှိပါတယ်.. AirFresher အမြဲဖျန်းထားပါတယ်…
ဈေးနှုန်းကတော့ ကျွန်တော် တို. စနေနေ.က စတည်းတာ ၆ယောက်ခန်းကို စောင်၊ခေါင်းအုံး အပါ ၄၀၀၀၀ ကျပ် တောင်းပါတယ် နှစ်ရက်နေမယ်ဈေးစစ်တော့ တစ်ရက်ကို ၃၀၀၀၀ ကျပ်နဲ. တည်းပါတယ်.. ထမင်းဆိုင်ဆိုရင်တော့ ဟင်းသုံးမျိုး နဲ. အ၀ စား တစ်ယောက် ၁၅၀၀ ကျပ်ပါ.. လူထုမေတ္တာ ထမင်းဆိုင်မှာပါ..
ဆွမ်းတော်ပွဲအတွက်ကတော့ ရင်ပြင်တော်ပေါ်မှာ ဈေးကြီးပါတယ်… အိမ်ကနေ အသီးတွေထည့်သွားတာပါ… ကင်မရာခွန်လဲ ဆောင်ရသေးတယ်နော် ၅၀၀ ကျပ်ပါ…
အခုကျွန်တော်တို. သွားတာ အပြီးအစီး တစ်ယောက်ကို ၆၅၀၀၀ ကျပ်ပါ.. အလှူအတန်းပါပါတယ်နော်.. ရှယ်သွားတာကို အဲဒီလောက်ကုန်ပါတယ်.ဗျာ…
Update အခြေအနေလေးတွေ သိရတာ ကျေးဇူးပါ။
ဒီဇင်ဘာလ ဆို၇င် အခန်းရဖို့တော်တော်ခက်တယ်ဗျို့ …..။ အစီဆုံးအချိန်ကိုး…
အတတ်နိုင်ဆုံးတော့ စောစောတတ်တဲ့ကားကိုရအောင်စီးပြီး စောစောအခန်း၇အောင်ထားရှာဗျ။
နောက်ကျ၇င်ဘယ်မှာ မှမ၇လို့ ၇င်ပြင်မှာအိပ်၇၇င်လွယ်ဘူး။ အေးလိုက်တိုက်လဲ လွန်းေ၇ာပဲ..ကွေလိုက်၇တာလဲ နှဖူးနဲ့ဒူးတစ်သား တည်းကိုဖြစ်ေ၇ာဗျာ။
“အေးအေးချမ်းးချမ်း” နဲ့ 
ကိုကျားမောင်ရေ.. ဆူး သွားမှာ ဒီဇင်ဘာ ဟုတ်ဘူးလေ နိုဝင်ဘာ လဆန်း
ရင်ပြင်မှာတော့ မအိပ်ချင်ဘူး။ ဟိုတယ်တွေကော ရဖို့ ခက်လား။ ရက်က မသေချာသေးလို့ ဟိုတယ် ဘိုကင် ချိတ်လို့ မဖြစ်သေးတာ.. အဲဒါ စိတ်ပူနေတာ..
ပရိက္ခာ စပွန်ဆာ လုပ်ပေးမယ်ပြောတယ်…
အခုလည်း သီလရှင်ပဲလေ.. ကံ၅ပါးလုံအောင် ထိန်းတဲ့ လူဆိုတော့ သီလရှင်ပဲ မဟုတ်ပေလား မောင်ပေါက်ဖော်.. ဘုရားက မရောက်တာ ကြာလို့ သွားချင်တာပါ။
ကင်မရာမန်း ပီသပါပေရဲ့။ တောင်တက်ကားကို စီးရင်း ဓာတ်ပုံရအောင် ရိုက်လာနိုင်လို့။
တည်းခိုခန်းကတော့ ၅ ယောက်ခန်းကို တစ်ရက် ၃၀၀၀၀ ကျပ် ပေးရပါတယ် ဆိုတာ ဘယ်လိုတည်းခိုခန်းပါလဲ။ အခါကြီးရက်ကြီး သွားတုန်းကတော့ မနှစ်က ခရစ်စမတ်မှာတောင် တစ်ခန်းကို တစ်ည ၆ သောင်းကျခဲ့တယ်။ ဘုရားပေါ်က လှေကားအဆင်းလေးက တည်းခိုးခန်းတွေပါ။ ခု ၃ သောင်းဆိုတော့ သိပ်တော့ မဆိုးဘူးနော်။ ကုသိုလ်ကံကောင်းတဲ့သူကျတော့လည်း ဘုရားတွေလှည့်ပြီး ဖူးမြော်နိုင်တယ်နော်…. သာဓု သာဓု သာဓု